CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- PLA / PET Taratasy fonosana momba ny tontolo iainana - CHINA JWELL Machines Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- PLA / PET TALOHA HEVITRA FOMBA NY TALOHA
PLA / PET Tabilao momba ny fonosana momba ny tontolo iainana
Ny asidra polylactic (PLA) dia karazan-fitaovana vaovao miorina amin'ny bio sy azo havaozina biodegradable. Ny PLA dia vita avy amin'ny akora matanjaka natolotry ny loharanom-pambolena azo havaozina (toy ny katsaka, mangahazo, sns.). Ny gliokaozy dia azo avy amina starch tamin'ny alàlan'ny saccharification, avy eo ny asidra lakika madio madio dia novokarin'ny fermentation de glucose sy ny karazana sasany, ary avy eo ny asidra polylactic misy lanjan'ny molekiola dia novolavolain'ny synthesie simika. Izy io dia manana biodegradability tsara, mety ho simba tanteraka ny zavamiaina bitika ao anatin'ny natiora voafaritra aorian'ny fampiasana azy, ary amin'ny farany dia miteraka gazy karbonika sy rano, izay tsy mandoto ny tontolo iainana. Tena mahasoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany, ary ekena ho fitaovana mifandraika amin'ny tontolo iainana.
Azo ampiasaina amin'ny famokarana takelaka PET sy PLA izy io, mampihena ny fihinanana angovo amin'ny fanamainana mialoha ny kristaly, ary mifanaraka amin'ny famokarana fitaovana faharoa. Izy io dia manana ny mampiavaka ny vokatra betsaka, ny fanjifana angovo ambany ary ny fanaovana plastika tsara. Ny visy dia rafitra fananganana tranobe misy fitambarana marobe, ary manana fampiharana marobe. Tsy mety amin'ny famokarana PET fotsiny izy io, fa mety amin'ny fitaovana biodegradable PLA sy fitaovana simba miorina amin'ny starch.
Ny tsipika famokarana plastika fiarovana ny tontolo iainana PLA / PET dia mavesatra indrindra amin'ny extruder avo roa heny, mpanova harato, paompy fandrefesana, maty, rool telo, bracket mangatsiaka, fanamafisana, familiana sns. Ny karazana vaovaon'ny extruder misy lafiny roa miaraka dia manana ny mampiavaka ny fanjifana angovo ambany, ny fizotra tsotra ary ny fikojakojana fitaovana mora foana. Ny firafitra mitambatra volo tsy manam-paharoa dia mampihena ny fidinan'ny viscosity an'ny PET resin. Ny roller simetika matevina mimanda dia manatsara ny fahombiazan'ny fihenam-bidy sy ny vokatra ary koa ny kalitaon'ny ravina. Ny fitaovana famahanana singa maromaro dia afaka mifehy tsara ny tahan'ny fitaovana vaovao, ny fitaovana fanodinana, ny masterbatch sns. Ny takelaka novokarina dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fanontana sy ny fonosana fanotofana plastika. Ny rafitra herinaratra dia mandray ny zanadrafitra Siemens, izay miavaka amin'ny fiasa tsotra, mandeha ho azy ambony ary mitahiry vola.
Ny barika dia ampiarahina amin'ny famoahana poakaty indroa mba hiantohana ny famoahana tanteraka ny rano sy ny gazy.
Ny extruder dia miaraka amina paompy metatra miempo miaraka amina famoahana herinaratra tsy tapaka ary fanaraha-maso mandeha ho azy ny lozisialy sy ny hafainganana.
Ny masinina manontolo dia mandray ny fifehezana PLC mba hahatsapany ny fifehezana mandeha ho azy ny fametrahana ny masontsivana, ny angon-drakitra, ny fiheverana ary ny fiasan'ny fanairana.
Ny tsipika famokarana extrusion tsy misy fanamainana PET izay tsy manamaina (tsy mila rafitra fanamainana dehumidification crystallization) dia petite sheet PET sy PLA avo lenta novolavolain'ny orinasa. Tsotra ny fizotry ny famokarany, ambany ny angovo, ary mihena be ny vidin'ny famokarana.
Fampiasana: fanodinana tena tsara, fangaraharana, sakana, tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy misy loto, mora amboarina sy toetra hafa.
Famoronana vakansy: fonosana sakafo, boaty kilalao, boaty fametahana, boaty fanomezana, fitaovana tanana ary fonosana fitaovana.
Fampiasana sakana: fonosana elektronika.
Fampiasana ankapobeny: aforitra, vozon'akanjo akanjo, fitaovana haingon-trano, lahatahiry, rakotra rakitra.
Fampiasana manokana: fitaovana ara-pitsaboana, fonosana amin'ny fanafody, fiarovana amin'ny alàlan'ny indostrialy, fiarovana amin'ny lafaoro fanaovana lafaoro.
HIVERINANy andro voalohany dia nanao sonia sonia lehibe tokana, JWELL rehetra dia mampiseho fampakarana marika!
NEXTCHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- Tsipika matevina HDPE Pipe Extrusion